GARBAHAAREEY ONLINE » YAAB: Ciidamada NISA oo arin caqabad kale ah ka sameeyay Muqdisho
YAAB: Ciidamada NISA oo arin caqabad kale ah ka sameeyay Muqdisho
Post Views = 1067
Ciidamada amaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa xiray waddooyin cusub oo ku yaala magaalada Muqdisho, halkii laga furi lahaa waddooyinka dhegxaanta lagu jaray.
Ciidamada nabad sugida Soomaaliya ayaa xalay jaray dhamaan waddooyinka jidcadayaasha ah ee soo galayay laamiyada magaalada Muqdisho, waxaana la dhigay caro badan.
Ciidamada ayaa jaray waddada Danwadaagaha ilaa isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, waxaana gaariga kaliya uu mari karaa laamiga isaga oo aan u dagan karin jidcayaasha hareeraha laamiga ahaa.
Sidoo kale ciidamada ayaa jaray dhamaan jidcadyaasha dhexmara wadada dheer ee ka timaada Isgoyska Banaadir, agmartana Isbitaalka Ex-Digfeer ee hadda loo bixiyay Erdogan, waxaana goysmada wadooyinka jidcadyaasha ah lagu geeyay illaa Isgoyska Tarabuunka.
Qorshahan cusub ee lagu gooyay wadooyinka jidcadyaasha ayaa looga gol leeyahay inaysan wax gaadiid ah marin, islamarkaana dhamaan gaadiidka ay maraan Isgoysyada Magaalada si loo sii baaro, maadaama ciidamada ammaanka ay halkaasi taagan yihiin.
Inta badan gaadiidka dilalka qorsheysan lagu gaysto iyo Mootooyinka ayaa waxa ay ku baxsadaan xaafaddaha dhexdooda, waxaana taasi u sahli jirtay inay furnaayeen wadooyin waaweyn oo xaafaddaha dhexmara.